Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ku baaqday in la qaado xayiraadda garoonka Kismaayo – Kalfadhi
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ku baaqday in la qaado xayiraadda garoonka Kismaayo
Wax yar kadib markii ay qabsoontay doorashadii Madaxweynaha Jubbaland oo dib loo doortay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa dowladda Federaalku waxay soo saartay go’aanka ay diyaaradaha shacabka ee aada ama ka yimaada deegaanada Jubbaland taas oo ah in ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa dhalisay muran badan oo uu dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka waxaana siyaabo kala duwan uga hadlay axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira.
Xildhibaan Foos Cali Cabdiraxmaan oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Cusub ee Jubbaland ayaa sheegtay in arrintan ay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada maamulkaasi.
“Go’aankaas saameyn aan wanaagsaneyn ayuu ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed, waxaa jiray dad badan oo xanuusan oo aan ka bixi karin safarkaas aadka u dheer. ‘’ Waxaa la ii sheegay dad sokor qabay oo sokortoodu ay aad hoos ugu dhacday kadib markii uu safarku ku dheeraaday.”
Waxay intaa ku dartay in dowladda Federaalka looga baahan yahya in ay u turmo shacabka, iyadoo intaa raacisay in go’aankan uusan wax saameyn ah ku yeelan maamulka Jubbaland balse uu saameyey shacabka kaliya.
“Waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya in aysan u arkin maamul goboleedyadu in ay dagaal kula jiran islamarkaana aysan cunaqabateyn saarin oo ay u turto maamulada si ay daryeel u helaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ay maamulaan.’’
Guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo ka hadlay warqad been abuur ah oo ka hadleysay doorashada